११ खर्बको आयात ७८ अर्बको निर्यात | गृहपृष्ठ
Home समाचार ११ खर्बको आयात ७८ अर्बको निर्यात
on: May 26, 2019 समाचार
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १० महीनामा रू. ११ खर्बको आयात भएको छ भने रू. ७८ अर्बको मात्रै निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा बढी भारतबाट रू. ७ खर्ब ६१ अर्बको वस्तु आयात भएको हो । जबकि, निर्यात जम्मा रू. ५० अर्बको छ । यस्तै, चीनबाट रू. १ खर्ब ६९ अर्बको वस्तु आयात हुँदा जम्मा रू. १७ अर्ब ८९ करोडको निर्यात भएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ, गाडी तथा फलामजन्य वस्तुहरू अत्यधिक आयात हुने सूचीमा छन् । यस अवधिमा रू. दुई खर्ब ६ अर्ब १० करोड ९० लाखको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । रू. १ खर्ब १९ अर्ब ८६ करोड ७५ लाखको फलाम तथा स्टील आयात भएको छ ।
त्यसपछि रू. १ खर्ब ५५ करोडको मेसिनरी उपकरण तथा पार्टपुर्जा, रू. ७७ अर्बको सवारी साधन, रू. ७२ अर्ब ८३ करोडको विद्युतीय उपकरण, रू. ४४ अर्बको खाद्यान्न (चामल, गहुँ, मकै), रू. २४ अर्बको तरकारी, रू. १७ अर्ब १४ करोडको फलाम तथा स्टील र रू. १५ अर्ब ४६ करोडको फलपूmल नेपाल भित्रिएका छन् ।
विभागका अनुसार गत आव २०७४/७५ को १० महीनाको तुलनामा यस वर्ष १७ दशमलव ८४ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । गत आव २०७४/७५ को १० महीनामा रू. ६६ अर्ब ६४ करोड ५६ लाखका नेपाली वस्तु भारतसहित तेस्रो मुलुक निर्यात भएका थिए ।
पछिल्लो १० महीनामा रू. ७८ अर्ब ५३ करोड ३९ लाखका नेपाली वस्तु निर्यात भएका छन् । १० महीनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी रू. ८ अर्ब ९७ करोड ८६ लाखको वनस्पति तथा जैविक घिउ निर्यात भएको छ । त्यसपछि टेक्सटाइलको कच्चा पदार्थ रू. आठ अर्ब २१ करोड, कफी तथा चिया रू. ६ अर्ब ८६ करोड, कार्पेट रू. ६ अर्ब ३६ करोेड तथा फलाम र स्टील रू. ५ अर्ब १८ करोडको निर्यात भएको छ ।
यस्तै, रू. १ अर्ब ८ करोडका तामाका भाँडावर्तन निर्यात भएका छन् । निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले अनुदानमा प्रोत्साहन दिँदै आएको छ । तर, त्यसबाट पनि निर्यात वृद्धि हुन नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।